Beef Cattle Breeding - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
/ Beef Cattle Breeding
It is located in Sunye , Sintgaing Township, Kyaukse District, Mandalay Region with an area of 126.84 acres where advanced beef cattle farming is being operated. It is alsoaplace where advanced hybrid cattle are being breed with local cows and Yinglin genes that has been researched for many years in China.
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ စဉ်ကိုင်မြို့နယ်၊ စွန်ရဲအင်းဒေသတွင် တည်ရှိပြီး ဧက ၁၂၆.၈၄ ဧက ကျယ်ပြန်ကာ အသားတိုးနွားများ မွေးမြူလျက်ရှိပါသည်။ ထိုပြင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တနေရာတည်းတွင် စပ်မျိုး နွားများအား ဒေသ နွားများနှင့်မျိုးစပ်ကာ မျိုးချောင်းစနစ်ဖြင့် မေထုံမဲ စနစ်ဖြစ်သော တရုတ်ပြည်မှ ရရှိသော စမ်းသပ်မွေးမြူခဲ့သည့် အသားတိုးနွား(စပ်မျိုး)များ မွေးမြူလျက်ရှိပါသည်။
Beef Cattle Breeding Gallery